सबै गुमाएर पनि विश्वास नगुमाएकी तसलिमा नसरिन: जेसुकै होस् आदर्श छोड्दिन - हिमाल दैनिक
सबै गुमाएर पनि विश्वास नगुमाएकी तसलिमा नसरिन: जेसुकै होस् आदर्श छोड्दिन
२५ श्रावण २०७६, शनिबार १६:५१
ठिक आजैको दिन, २५ वर्ष अगाडि बंगलादेश सरकारले मलाई मेरो देश र मेरो घर सदाका लागि छोड्न बाध्य बनायो।
त्यसपछि म निर्वासनमा बस्दै आएको छु। अहिले मलाई लाग्दछ, मेरो बाँकि जीवन नै पराइको भूमिमा विताउन लेखेको रहेछ। मेरो किताबमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। इस्लामिक अन्धभक्त, फतवा र नारीवादी मौनताले मलाई लुछ्नुसम्म लुछ्यो र चिथोर्यो। तर, त्यी कुनै कुराले पनि मलाई झुकाउन भने सकेन। तर, अहिले म बुझ्दैछु, कि मेरो घरमा म अब कहिल्यै फर्किन सक्ने छैन।
म घरबाट बेघर भएँ तर, मसँग मरो भाषा छ जहाँ मैले घरको रुपमा शरण लिन पाइरहेकी छु।
जसरी मलाई पटक पटक मेरो देश देशबाट धपाइयो, पश्चिम बंगालको शहर कोलकाता र मेरो छिमकीको घरबाट समेत धपाइयो, त्यो २५ वर्ष भयो। अगस्ट ८, १९९४ देखि म निर्वासनमा बस्दै आइरहेकी छु र अहिलेसम्म पनि मैले खुट्टा टेक्ने भरपर्र्दो जमिन पाउन सकिरहेकी छैन।
यहिबीचमा, मेरा परिवारका सदस्यहरु जो बंगलादेशमा हुर्के, बढेर र बृद्ध हुँदै मरेको खबर पाएँ तर, मैले उनीहरुलाई न त भेट्न नै पाएँ न त अन्तिम विदाई दिन नै।
तरपनि मैले हार खाएको पनि छैन र निराशले मलाई गलाएको पनि छैन। हरेकपल मैले चोटमाथि चोट खाइरहेको छु तर, म विचारको स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर अडिग भएर लडिरहेको छु। अति भन्दा अति कठिन र खराब परिस्थितिमा पनि मैले मेरो आदर्शलाई छाडेकी छैन।
अतिवादीहरुलाई मैले कसरी चिढाएँ
मेरो ठूलो दाजु कवि र एउटा साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादक थिए। जसले मलाई १३ वर्षकै उमेरमा कविता लेख्न प्रेरणा दिए।
म विज्ञानको विद्यार्थी थिएँ तर, कला र साहित्यको संसारमा आफूलाई उभ्याउने कोशिशमा थिएँ। मलाई थाहा छैन म किताबी किरो बनेकोमा त्यसले राम्रो अथवा नराम्रो प्रभाव पार्यो। पछि म पनि दाजुले जस्तै आफ्नै जर्नलको सम्पादनमा लागे।
जब म मयमनसिंह मेडिकल कलेज, बंगलादेशमा अध्ययन गर्न थाले, त्यतिबेला पढाइको चापले साहित्यिक पत्रिकामा काम गर्न केही समयका लागि बन्द गरेँ। तर, जब म चिकित्सा पेशामा आबद्ध भए त्यसपछि मैले कविता, निबन्ध, लघु कथा र उपन्यास लेख्न सुरु गरेँ जसलाई त्यतिबेलाका राष्ट्रिय साप्ताहिकहरुले नियमित स्तम्भका रुपमा स्थान दिएर छापे पनि।
जब मेरा नियमित लेख र पुस्तकहरु लोकप्रिय हुन थाले महिला विराधी पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रस्त व्यक्तिहरुले महिलाका लागि समान अधिकारको पक्षमा लेखिएको त्यी लेखहरु मन पराएनन्। ‘सबै धर्महरु महिला अधिकारका विरुद्ध छन्’ भन्ने मेरो भनाइले अतिवादी सोच भएकाहरुलाई आक्रोशित बनायो।
इस्लामबारे मैले गरेका आलोचनाबाट आक्रोशित बनेका मुस्लिम कट्टरपन्थी र अतिवादी अन्धभक्तहरुले मृत्यु दण्डको माग गर्दै मेरा विरुद्ध प्रदर्शन गर्न सुरु गरे। मुल्ला र मुफ्तिजहरुले मेरो टाउकोको मूल्य तोके। राजनीतिक दलहरुले मलाई समर्थन दिनुको साटो तिनै अतिवादीहरुको पक्षपोषण गर्न थाले। मानव अधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरुको समूह समेत मौन रह्यो।
जब सरकारले मेरा विरुद्ध समाजवमा अफवाह फैलाएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गर्दै मेरो नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो त्यतिबेलाको परिस्थिति गम्भीर थियो। जीवन रक्षाका लागि म भूमिगत हुन बाध्य भएँ। दुई महिनापछि मलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइयो। त्यो त्रासदिपूर्ण दिन सम्झिँदा अहिले पनि मेरो मन डरले थर्रथरी काप्छ।
बंगाललाई वैकल्पिक घरका रुपमा रोजेँ
म निर्वासनमा रहँदा धरै घटनाहरु घटे।
बंगलादेशमा आउने कुनै पनि सरकारले मलाई मेरो देश र मेरो घरमा फर्कन दिने छन् भनि मैले कहिल्यै कल्पना समेत गर्न सकेकी थिइन्। विस्तारै मेरा सबै आफन्तजनहरु वितेर गएः मेरा अविभावक, मेरी नानी (फूपु), मेरी प्यारी सानीआमाहरु, साना बुबा, दाजुभाई, मेरा गुरुहरु जसलाई मैले उनीहरुको अन्तिम क्षणमा समेत भेट्न पनि पाइन।
दशक वित्यो। म पश्चिम युरोपको उत्सवमा छु, जहाँ मलार्ई नागरिकता, सुरक्षा र सम्मान दिइएको छ। प्रकाशकहरुले मेरा पुस्तकहरु अनगिन्ती भाषामा प्रकासित गरिरहेका छन्। यति धेरै नाम र इज्जत पाउँदा पनि मेरो मन सधैँ देशमा फर्किन चाहिरहेको छ।
त्यतिबेला पश्चिम बंगला र भारतलाई मैले मेरो वैकल्पिक घरको रुपमा नरोजेको भए के हुन्थ्यो होला?
म कुनै पनि धर्ममा विश्वास गर्दिन र भारतलाई कुनै पनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्न पनि चाहन्न। मैले भारतलाई आफ्नै मुलुकको रुपमा सोच्न र लिने सवालमा कुनै कठिनाई व्यहोर्नु परेन। किन कि, विशेषगरी मैले लेख्ने र बोल्ने भाषा जुन थियो त्यो पश्चिम बंगला र भारतका अधिकांश स्थानमा पनि बोल्ने गरिन्थ्यो।
तर, राजनीतिले मलाई पश्चिम बंगालमात्र होइन भारत नै छोड्न बाध्य बनायो। भारतमा पुनः फर्किन पनि मैले धेरै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्यो।
मानवताका लागि म लडिरहन्छु
जहिँतहीँका राजनीतिकर्मी र मुस्लिम अन्धभक्तहरुले मलाई इस्लाम विरोधीको विल्ला भिराएर मलाई आफ्नोे राजनीतिक स्वार्थको मोहरा बनाइरहेका छन्। अधिकांशलाई यो कुरा स्वीकार्न पनि लाज लाग्दछ कि मैले मेरो सम्पूर्ण जीवन मानवताका लागि व्यथित गरिरहेकी छु भनेर।
पाँच वटा पुस्तकहरु जसमा मैले मानव अधिकारकाबारेमा लेखेकी छु त्यी पुस्तकहरुमाथि बंगलादेश सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। बंगलादेश विस्तारै इस्लामिक अतिवादी मुलुकको रुपमा रुपान्तरित हुँदैछ। हुँदाहुँदा पश्चिम बंगालको सरकारले समेत मेरो एउटा पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जसलाई उच्च अदालतले दुई वर्षअघि मात्रै खारेज गरिदिएको थियो।
तर, मेरा मनमा यो अनुउत्तरित प्रश्न रहिरहेको छ कि, किन मेरै पुस्तकहरु नै प्रतिबन्धको पहिलो स्थानमा पर्छन? के इस्लामले कुनै पनि आलोचनाका आवाज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहिल्यै स्थान दिँदैन त?
जहाँसुकै होस् अथवा मेरो अन्तिम श्वास रहेसम्म म महिलाको समान अधिकारका पक्षमा लेखि नै रहनेछु। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्याय र सुन्दर समाज जहाँ कुनै पनि किसिमको भेदभाव हुँदैन त्यसको पक्षमा सधैँ उभिइरहने छु। सबै खाले विभेद, शोषण, दमन, अत्याचार र अन्यायको विरुद्धमा र मानवताको पक्षमा निरन्तर लेखिरहने छु। यसको प्रतिफल स्वरुप यदि मलाई मृत्युदण्ड मिल्छ भने पनि मिलोेस् तर, कुनै चिन्ता छैन।
मेरो भाषा नै मेरो देश हो
निर्वासनमा रहेको पनि २५ वर्ष भएछ। आखिर मेरो दोष के हो? केबल मानवताकोबारेमा लेख्नु? यत्ति नै हो।
आज पनि मैले फतवा र धम्की पाएकी छु। म कमजोर धरातलमा उभिएकी छु। अझै कति धेरै अनिश्चिय र पीडाहरुको सामना मैले गर्नु पर्ने छ। म यो स्पष्टसँग देख्न सक्छु कि यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्ने कुनै देश छैन। मेरो भाषा नै मेरो देश हो। जसले जतिसुकै कुरा मबाट खोसेर लगे भने पनि मेरो दृढ विश्वास यो छ कि मेरोे भाषा कसैले पनि मबाट खोसेर टाढा लैजान सक्दैन।
मिडियाको ठूलो समूहले मेरा लेख रचनाहरु प्रकाशित नगर्न पनि सक्दछन्। म सबैभन्दा खराब प्रकृतिको सेन्सरशिपको नमूना बनेकी छु भने जीवनका कतिपय मोडहरुमा खतरानाक स्थितिको सामना पनि गरेकी छु।
साँच्चै भन्नु पर्र्दा यो अति नै खतरनाक धरापमाथिको हिँडाइ जस्तै भएको छ मेरो जीवन। तथापि, यो मेरो दृढ निश्चय हो कि, म भारतमै बस्ने छु। यसले भारतलाई यो उपमहाद्धीपमा उ मात्र एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ अझै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान हुन्छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने आधार दिन सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिले फरक विचार राख्दैमा भारतले उसलाई त्यसको बदलामा झुण्ड्याउँने अथवा जेलमा कोच्ने कार्य गर्दैन। बरु उल्टै उसलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। साँचो अर्थमा लोकतन्त्र भनेको यहि होइन त?
(२५ वर्षदेखि निर्वाशित जीवन विताउँदै आएकी चर्चित लेखिका तसलिमा नसरिनले द प्रिन्टमा प्रकाशित गरेको लेखमा आधारित)
Prevपछिल्लोमध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउन तीन हप्ता लाग्ने
अघिल्लोराष्ट्रपतिको भूमिका निश्पक्ष भएन, राष्ट्र प्रमुखमा अब राजसंस्था राख्नुपर्छः अध्यक्ष जबराNext